Huayna Picchu, harena any Peroa | Vaovao momba ny dia
Peru Izy io dia iray amin'ireo firenena mahaliana indrindra hitsidika an'i Amerika atsimo. Izy io dia manana kolontsaina taloha sy rava amin'ny kolontsaina samihafa izay mahafinaritra. Angamba ny rava malaza indrindra dia ny an'i Machu Picchu, ilay traikefa tiana hatao rehetra, saingy tsy azontsika atao ny mamintina an'i Peroa amin'izany.
ny rava an'i Huayna Picchu Harena tsy dia fantatry ny mpizahatany mahazatra loatra izy ireo, na dia mety henonao aza izy ireo voatonona eo am-pandaminana ny fiakarana mankany Machu Picchu. Mendrika ny hahalala izy ireo satria, tahaka ireo malaza indrindra hafa, dia rava izy ireo izay miafina any amin'ny havoanan'ireo tendrombohitra. Handeha any Peroa ve ianao? Soraty avy eo ity fampahalalana ity sao diso anjara ianao.
2 Tsidiho ny Huayna Picchu
Ny dikany amin'ny fiteny Quechua, ilay fiteny tany am-boalohany, dia tendrombohitra tanora. Raha ampitahaintsika amin'ny tendrombohitra Machu Picchu ity tendrombohitra ity dia a tendrombohitra kely kokoa fa inona izy io dia manana lalana miakatra lavitra kokoa, tery ary mampidi-doza.
Ny tendrombohitra dia manana 2700 metatra ny haavony ary raha te hahatratra ny tampony dia ilaina ny mamaky an'i Machu Picchu satria misy lalana maloto mampitohy ireo tendrombohitra roa avy amin'ny ilany avaratry ny voalohany. Rehefa hitanao mijery ny tendrombohitra any aoriany ny karatra paosin'ireo rava dia i Huayna Picchu izany. Mijery fotsiny ny làlana kely dia manome anao vertigo fa tsy maintsy tadidinao fa ny Incas dia mpanao trano lehibe ary raha nanao lalana izy ireo dia satria io lalana io dia azo zahana.
Ny fahalalana ny tendrombohitra amin'izany dia ao anatin'ny fitsangatsanganana an-tongotra inona no azonao atao amin'ny trano mimanda ao Machu Picchu. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mividy tapakila ianao ary hahafantatra mialoha fa tsy izay rehetra miakatra any Machu Picchu akory no tonga ao Huayna Picchu. Fa maninona Eny, satria ety sy mideza ny lalana ary tsy mety amin'ireo mijaly amin'ny vertigo. Soa ihany fa napetraka ny tariby fiarovana nefa mbola olana izany.
Raha fintinina, ny fiakarana mankany Huayna Picchu dia somary mitsangana ary izany no mahavariana, iray amin'ireo dia tsara indrindra azonao atao eto.
Tsidiho ny Huayna Picchu
Araka ny voalazantsika tetsy ambony ilaina ny mividy tapakila manokana ary tsy vitsy. ihany 400 ny tapakila amidy ka azonao atao hatramin'ny enim-bolana alohan'ny daty taloha. Ary olona 400 ihany no ekena isan'andro, ka raha mandeha amin'ny vanim-potoana avo dia tadidio izany. Rehefa mandamina dia tokony hieritreritra tapakilan'ny lamasinina, hotely ary ity manokana indrindra, miaraka daholo.
Noho izany, tsy maintsy mankany Machu Picchu aloha ianao ary aorian'ny fitsidihana ilay trano mimanda mankany avaratra dia mamakivaky ny faritry Huayranas na Sacred Rock ianao ary eo dia mihazakazaka mankamin'ny trano fisakafoanana mifehy ny fidirana amin'ny tendrombohitra. Vondrona roa miditra isan'andro: ny iray manao azy eo anelanelan'ny 7 sy 8 maraina ary ny iray kosa eo anelanelan'ny 10 sy 11 maraina. 400 ny olona avela, izany hoe 200 isaky ny fiovana.
Kajy a dia an-tongotra roa sy sasany manelanelana ny miakatra sy midina nefa tsy manisa ny fotoana laninao. Ny fandehanana dia antonony hatramin'ny sarotra, raha ny fahasarotana, satria araka ny nolazainay, dia mideza ny tendrombohitra ary na dia misy tohatra sokitra ao anaty vatovato sy tariby fiarovana aza, ny tena marina dia tsy dia mora loatra, avelao ihany raha mijaly ianao vertigo. Inona avy ireo valisoa?
Ery ambony dia ilay Tempolin'ny volana, voasokitra ao anaty lava-bato voajanahary. Izy io dia iray amin'ireo fananganana ambanin'ny tany tsy mampino indrindra ao amin'ilay faritra. Tsy lava-bato tokana izy io fa maromaro izay rakotry ny Inza tototry ny vatosoa voaangona ao anaty vatolampy voajanahary. Voaravaka ny rindrina ary mora ny mieritreritra fa tsy mora ny namolavola ity toerana ity. Tsy misy mahalala ny asany tany am-boalohany satria norobaina ny maro tamin'ny haingon-trano. Mahamenatra
Noho izany, ny anarana ahafantarana ilay lava-bato, tempolin'ny volanaSomary arbiterary ary tsy misy arkeology hanohana azy na eo aza ny lazany. Etsy ankilany, ny làlana mampitohy an'i Machu Picchu sy ny forongo Huayna Picchu ary ny iray amin'ireo làlany ihany no tonga any an-tampon'ny misy vato iray fantatra amin'ny anarana hoe Seza Inca ary ny sasany fomba fijery mahafinaritra momba ny trano mimanda ao Machu Picchu sy ny renirano Urubamba miaraka amin'ny rano misamboaravoara.
Ny sary dia manondro fa lalana sarotra izy io kanefa amiko dia tsy tokony halainao izany satria ambonin'ireo rehetra ireo fomba fijery panoramic mahafinaritra fotsiny, manaisotra ny fofonainy ianao. Eritrereto fa 400 metatra eo ho eo ambonin'ny rava ao Machu Picchu ianao ...
Etsy ambony dia nilaza izahay fa tsy maintsy mividy tapakila manokana hanaovana ity fitsidihana ity ianao. Tsy mitovy ny tahan'ny ho an'ny Peroviana sy ny vahiny. Raha toa ka ny fitsidihana mitambatra Machi Picchu / Huayna Picchu dia mitentina 200 sol isaky ny olon-dehibe vahiny (manodidina ny 200 euro), ary faladia 125 isaky ny mpianatra vahiny (33 euro). Ireo vidiny ireo no lafo indrindra amin'ny fitsidihana satria raha mitsidika an'i Machu Picchu, tranombakoka na tendrombohitra fotsiny ianao, dia eo anelanelan'ny 152 sy 174 ny vidiny.
Rehefa mitsangatsangana eto dia tadidio ny mitondra kiraro ahazoana aina, solomasoandro, solomaso, satroka na satroka, palitao maivana izay mandroaka ny orana sy ny rano. Amin'ny firy taona no mitsidika an'i Huayna Picchu? Eo anelanelan'ny volana Mey sy Oktobra satria eo anelanelan'ny Novambra sy Martsa dia vanim-potoanan'ny orana ary ny tsy fahampian'ny rano dia ampitomboin'ny loza ateraky ny fihotsahan'ny tany izay indrisy fa matetika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Huayna Picchu, harena any Peroa
Ahoana ny fomba hisafidianana fiantohana fitsangatsanganana mety indrindra?